एसएमएस भनेको के हो? | Martech Zone परिवर्णी शब्द
Martech Zone » परिवर्णी शब्द » एस बाट सुरु हुने परिवर्णी शब्द	» एसएमएस
SMS को संक्षिप्त रूप हो छोटो सन्देश सेवा.
मोबाइल उपकरणहरू मार्फत पाठ-आधारित सन्देशहरू पठाउनको लागि मूल मानक। एउटा पाठ सन्देश खाली ठाउँ सहित 160 वर्णहरूमा सीमित थियो। SMS अन्य सिग्नलिंग प्रोटोकलहरू भित्र फिट गर्न डिजाइन गरिएको थियो, त्यसैले SMS सन्देश लम्बाइ 160 7-बिट क्यारेक्टरहरूमा सीमित छ, अर्थात्, 1120 बिट, वा 140 बाइटहरू। यदि एक प्रयोगकर्ताले 160 क्यारेक्टरहरू भन्दा बढी पठाउँछ भने, यो लिङ्क गरिएको सन्देशमा6वर्णहरूको कुल संख्या 918 भागहरूमा पठाउन सकिन्छ।